Voamarina ny vidin'ny Apple Music any Espana | Avy amin'ny mac aho
Miseho any Espana ny vidin'ny Apple Music
Tamin'ny farany dia tanteraka ny faminaniana ary averimberina eto indray ny fanovana euro / dolara mahazatra ary any Espana dia efa manana vidiny ofisialy isika Famandrihana Apple Music ary tsy iza izany fa 9,99 Euros isam-bolana na dia amin'ny fotoana fisoratana anarana aza dia azonao atao ny mampiasa fitsarana maimaimpoana mandritra ny telo volana.
Raha apetraka amin'ny fomba fijery isika, tolotra hafa mitovy amin'ny Spotify dia manolotra famandrihana isam-bolana amin'ny vidiny 14,99 Euros isam-bolana ho an'ny olona roa, ohatra. Apple Music dia manolotra bonus ho an'ny fianakaviana manana toetra mitovy amin'izany miaraka amin'ny mpikambana enina, amin'ny vidiny mitovy. Mazava fa Spotify dia serivisy voatokana ary manana fahombiazana tena tsara mifanohitra amin'ny Apple Music izay natolotra ary mbola tsy nanomboka niasa ka tsy fantatsika na handeha tsara na ratsy na dia asehon'ny zava-drehetra fa ho filokana tsara rehefa atambatra ny hevitra sy ny endri-javatra avy amin'ny iTunes, Snapchat ary Spotify… rehetra ao anatin'ny iray.
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy dinihina fa ireo mpampiasa any Etazonia (ny ankamaroan'izy ireo) dia tsy maintsy mandoa hetra ampidirina amin'ny famandrihana $ 9,99 izay eto efa tonga amin'ny toerana misy anao miaraka amin'ny VATAnkoatr'izay, ny euro dia mbola somary ambonin'ilay dolara ihany noho ny fanarenana kely.
Angamba ny fiasa manaitra indrindra amin'ny fahitako azy dia ny Connect, sehatra iray mitovy amin'ny SoundCloud ahafahan'ireo mpanakanto mizara votoaty amin'ireo mpanaraka azy ary avy eo mahazo laza bebe kokoa sy mahatratra mpihaino marobe. Heveriko fa Apple Music dia filokana mazava nataon'i Apple ho setrin'ny fanovana natao tamin'ny tsena mozika tao anatin'izay taona vitsivitsy izay natomboka tamin'ny revolisiona iPod sy iTunes Ary ankehitriny dia manohy mampifangaro ireo hevitra tsara indrindra amin'ny serivisy hafa amin'ny iray izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Miseho any Espana ny vidin'ny Apple Music
Apple kely dia hoy izy:
Raha niresaka momba ny paoma aho dia efa nilaza ny vidiny tamin'ny andro nanolorana azy ho an'i Espana.
Mamaly an'i Manzanita
Skype dia tonga amin'ny kinova 7.9 amin'ny Mac misy fanamboarana hafa
Hanomboka ny fanavaozana ny Apple Store amin'ny volana Jolay mba hanomezana «fahatsapana premium»